अमेरिकाको लागि विविधता चिट्ठा (ई-डीभीलटरी ) खुल्यो ,नतिजा यसरि हेर्नु होस् ! - Enepalese.com
अमेरिकाको लागि विविधता चिट्ठा (ई-डीभीलटरी ) खुल्यो ,नतिजा यसरि हेर्नु होस् !
इनेप्लिज २०७४ वैशाख २० गते १२:२३ मा प्रकाशित
अमेरिकाको इलेक्ट्रोनिस डाइभर्सिटी भिसा(इडीभी) २०१८को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । गत वर्ष भरिएको डीभीको नतिजा सार्वजनिक भएको छ l गत वर्षको ४ अक्टोबर २०१६ देखि ७ नोभेम्बर २०१६ सम्म डीभीको लागि आवेदन खुल्ला भएको थियो । नतिजाको लागि डीभी लट्टरी डट स्टेट डट जीओभीमा गएर हेर्न सकिन्छ ।
नतिजा हेर्नका लागि डीभी आफुले आबेदन भर्दा पाएको सुनिस्चित संख्या (कन्फर्मेशन नम्बर ) आवश्यकता त्यहाँ राखे पछि थाहा पाइने छ l नेपालमा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म (बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म) सो केन्द्रमा फोन नं. १–८००–०९१–०११४ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ थिच्नु होस् !